ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပထမသုံးလပတ်တွင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - လုံခြုံမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု
FCHC သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းကြေငြာခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည် Telehealth သင်၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုချိန်းဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ သီဟသူရ သင်၏ဆေးကုသမှုသမိုင်းကိုသင်နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုကျော်။ သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းမဆိုဖြေဆိုရန်သင့်အားလူနာပညာပေးသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည် - သင်အဆင်ပြေမည့်အချိန်နှင့်နေရာတွင်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာပိုမိုထွက်ရှာပါ Telehealth စာမျက်နှာ.
အိပ် (၁၅ ပတ်အတွင်း)
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟုခေါ်သည် လေဟာနယ် aspiration။ ထိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်နှိုက်သည်များသောအားဖြင့်ငါးမိနစ်မှဆယ်မိနစ်ခန့်သာကြာလေ့ရှိပြီးရုံးတွင်းမီးယပ်အထူးကုဌာနဖြစ်သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်နှိုက်သည်မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသော်လည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းများအတွက်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်းသို့သွားရန်စီစဉ်ပါ 2.5 -3နာရီ သင်၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုရက်ချိန်းအတွက်။ (အကယ်၍ သင်၏နောက်ဆုံးရာသီရာသီသည်လွန်ခဲ့သော ၁၂ ပတ်ကျော်ကဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးခန်းသို့သွားရန်စီစဉ်ပါ ၄ နာရီအထိ။ )
သင်၏ချိန်းဆိုမှုတွင်သင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သင်၏ခံစားချက်များနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်သင်၏လူနာပညာပေးသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ဤအတွေ့အကြုံ၌လူနာများနှင့်သင်နှင့်အတူပါ ၀ င်နေသူများကိုကူညီရန်နှင့်ကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
အောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုတွင် Falls Church Healthcare Centre မှဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုမီးယပ်အထူးကုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Dr.
ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာ Falls - Aspiration Abortioncare
ဒီဗီဒီယို Watch YouTube ပေါ်မှာ.
သင့်အားစာရွက်စာတမ်းအထောက်အကူပြုရန်၊ သင်၏ချိန်းဆိုမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်နှင့်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေကြားရန်သင့်အားထောက်ခံသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်စိတ်ရှည်သည့်ပညာပေးသူကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်ချိန်းဆိုသည့်အချိန်တွင်သင်၏ sonogram ကိုရရှိလိမ့်မည်၊ ဆေးမှတ်တမ်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်မည်၊ ၄ င်းသည်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အနားယူရန်အတွက်အရေးကြီးသောအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်အဖွဲ့လက်မှတ်ရဆရာ ၀ န်တစ် ဦး မှလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်နှိုက်ကသာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာလေ့ရှိပြီးသန္ဓေသားကို sonogram ဖြင့်မြင်သည်အထိပြုလုပ်လေ့မရှိပါ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုကုသမှုမတိုင်မီကသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုပျော့ပြောင်းစေသော misoprostol ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်
ဒေသခံမေ့ဆေး (နိုး) သို့မဟုတ် IV သက်သာခြင်း (အိပ်ပျော်) အုပ်ချုပ်သည်
မြုံဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ဖြုတ်။ ဆေးခြောက်ကိုယောနိအခေါင်းပေါက်မှတဆင့်၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအဖွင့်နှင့်သားအိမ်အတွင်းသို့ညင်ညင်သာသာထိုးသွင်းသည်။
အဆိုပါ cannula သားအိမ်မှကိုယ်ဝန်တစ်သျှူးကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်နူးညံ့သိမ်မွေ့စုတ်ယူခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်တဲ့စက်နှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်။ ဤသည်အနည်းငယ်, နှောင့်အယှက်အသံစေနိုင်သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ၏ ounge ည့်ခန်းတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်အချိန်များစွာပေးသည်။ သင့်အားသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့ဂရုစိုက်ရမည်နှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုရေးသားထားသောနှုတ်ဖြင့်ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်သင့်အားလွတ်ပေးလိမ့်မည်။
သငျသညျဆိုရင် မ IV Sedation ရှိရင်နိုးပါလိမ့်မယ် - သင်လုပ်နိုင်သည်:
Tylenol သို့မဟုတ် Motrin ကိုသင်၏ချိန်းဆိုမှုမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ ကြာယူပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် IV Sedation (သင်အိပ်ပျော်လိမ့်မည်) ဖြစ်ပါက -
ကြိုတင်ချိန်းဆိုချက်မတိုင်မီ (၆) နာရီကြို။ မစားမသောက်ရ၊ သွားဖုံးဝါးမစားပါနှင့်။ သင်အစာရှောင်ခြင်းမပြုမီရေကိုသေချာစွာသောက်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင့်ကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါ။ သင်အိမ်သို့မမောင်းနိုင်ပါ။
အနည်းဆုံး ၃-၄ နာရီခန့်တွင်ဗဟိုတွင်ရှိရန်စီစဉ်ပါ။ လူနာခန်း၌သင်မိနစ် ၃၀ ပြန်လည်ကုစားနိုင်သည်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ ၄၈ နာရီအကြာတွင်ထိုးခြင်းကိုရှောင်ပါ
အချို့အမျိုးသမီးများသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးရက်အနည်းငယ်တွင် pad ကိုအသုံးပြုရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
သင့်တွင်ပါ ၀ င်သည့် aftercare ညွှန်ကြားချက်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည် အနည်းဆုံး ၁ ပတ်အဘို့အဘယ်သူမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမ။
သင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီး ၃ ပတ်အကြာတွင်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေကိုဖော်ပြရန် FCHC သို့ဆက်သွယ်ပါ။ သင်ဖုန်းခေါ် ဆို၍ ဖြစ်စေ၊ နောက်ဆက်တွဲပုံစံကိုဖြည့်စွက်။ ဖြစ်စေသင်လုပ်နိုင်သည် https://www.fallschurchhealthcare.com/follow-up .
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်။ ။ ဖုန်းမခေါ်မီဆီး၌ကိုယ် ၀ န်ဆောင်စစ်ဆေးမှုကိုပြီးဆုံးခြင်းသည်သင်၏သူနာပြုအားသင်၏နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားမိသားစုစီမံကိန်း / မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေလေ့လာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Vacuum Aspiration ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးသားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဖွဲ့ချုပ် ငါကိုယ်ဝန်ရှိသည် - ရွေးချယ်စရာများကားအဘယ်နည်း။
အမျိုးသားကိုယ်ဝန်ဖျက်ချအဖွဲ့ချုပ် ပထမသုံးလပတ်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
သင်သည်ဤပုံစံ၏ PDF ဖိုင်ကိုဒေသအလိုက်လည်းကူးယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ကြွက်တက်ခြင်း, အစက်အပြောက်နှင့် / သို့မဟုတ်သွေးထွက်မျှော်လင့်ရသည်။
မမှန်မကန်သွေးထွက်ခြင်းနှင့်အစက်အပြောက် 6-8 ပတ်ကြာဆက်လက်လိမ့်မည်
သင်၏အွန်လိုင်း / ဖုန်းနောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ်မှုတွင်မြဲနေခြင်းနှင့်သွေးထွက်ခြင်းများကိုဆွေးနွေးပါ
ကိုယ် ၀ န်ရှိ hCG ဟော်မုန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာပြီး ၁၀-၁၄ ရက်အတွင်းကိုယ်ဝန်လက္ခဏာများကျဆင်းသွားသည်
အကယ်၍ သင့်တွင် IV ဆေးသက်သာခြင်းရှိပါကနောက်တစ်နေ့မတိုင်မီကားမောင်းခြင်းမရှိပါ
၃-၇ ရက်အတွင်းသွေးထွက်လွန်သည်အထိ tampons သို့မဟုတ် menstrual cups မရှိပါ
ဆရာဝန်များက ၇ ရက်ကြာညွှန်ကြားချက်မရှိပါကအင်္ဂါဇာတ်ဆေးများသို့မဟုတ်ဆေးထိုးခြင်းမရှိပါ
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ recover လုပ်နည်း
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကျခြင်းကို Ibuprofen နှင့်ဆက်ဆံပါ။ ဝမ်းဗိုက်သို့မဟုတ်အနိမ့်ကျောတွင်အအေးထုပ်သို့မဟုတ်အပူ pad ပါကအထောက်အကူပြုသည်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း (အလေးမခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း) သည်သွေးထွက်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်
ကိုယ်ဝန်သည်နောက်လာမည့်ကာလမတိုင်မီဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ မိသားစုစီမံကိန်းအချက်အလက် www.bedsider.org/methods
ဆီးကိုယ်ဝန် hCG ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုများသည် ၄ ​​ပတ်မှ ၆ ပတ်အထိအပြုသဘောဆောင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ပါကခေါ်ဆိုပါ
persistent အဖျား - ၁၀၀.၄ နှင့်အထက် ၄ နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအချိန်များအတွက်
အလွန်လေးလံသောသွေးထွက်ခြင်း - တစ်နာရီလျှင်နှစ်နာရီတိုင်းတစ်နာရီမစကတ်စုပ်ယူခြင်း
၂၄ နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောကြာရှည်အန်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းလျှောခြင်း
8 ပတ်သို့မဟုတ် persistent ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်ကာလမ
အွန်လိုင်း: သွားပါ fellchurchhealthcare.coမီတာ / နောက်ဆက်တွဲ သို့မဟုတ် 703-532-2500 ကိုခေါ်ပါ။
သင်၏နောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုမတိုင်မှီသင်၌ပေးသောဆီးကိုယ်ဝန် hCG ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုကိုပြီးစီးပါ